မြန်မာပြည် တောင်ဖျားမှသည် မြောက်ဖျားအထိ၊ အရှေ့ဖျားမှသည် အနောက်ဖျားအထိ နေရာစုံ ဒေသစုံ တမူထူးခြားသည့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် အလှအပများ။ မတူသော ရုပ်ရည်သွင်ပြင်၊ မတူသော ဘာသာစကား၊ မတူသော ဓလေ့ထုံးစံတို့ဖြင့် ရှင်သန်နေကြသည့် တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံတို့၏ ယဉ်ကျေးမှု ဘ၀များ၊ နှစ်သက်မြတ်နိုးဖွယ် သဘာဝများနှင့် တန်ဖိုးထား လေးစားဖွယ် ယဉ်ကျေးမှုများ။ ဝေးလံခေါင်ဖျား ဒေသက လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး အကြောင်းခြင်းရာများ။ လူမသိ သူမသိ စိတ်ဝင်းစားဖွယ် ဖြစ်ရပ်များ။ မြို့ကြီးပြကြီးနှင့် ဝေးကွာကမ်းလှမ်းသော ကျေးလက်ဒေသ ပြည်သူလူထု၏ နေ့စဉ်ဘ၀နှင့် သူတို့ ရှင်သန်ရာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ရောစပ် တင်ပြထားသည့် ခရီးသွား သတင်းနှင့် ပညာပေး အစီအစဉ်။
တို့ပြည်၊ တို့မြေ အစီအစဉ်မှ အပြောင်းအလဲ နှင့် သူတို့
691 April 2, 2016
တို့ပြည်၊ တို့မြေအစီအစဉ်မှ မြန်အောင်သို့….
856 March 26, 2016
တို့ပြည်၊ တို့မြေ အစီအစဉ်မှ ကျိုင်းတုံနယ်သို့……………
1237 March 19, 2016
တို့ပြည် တို့မြေ အစီအစဉ်မှ သုံးနိုင်ငံဆုံတဲ့ ရွှေတြိဂံသို့……
1100 March 12, 2016
တို့ပြည်တို့မြေ – “၀” အထူးဒေသတခွင်
1454 March 5, 2016
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းက “၀”ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ပန်ဆန်းမြို့ကို တို့ပြည်တို့မြေ အဖွဲ့သားတွေ ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ တရုတ်ပြည်နဲ့ နယ်စပ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့ “၀” အထူးဒေသတွင်းက လူမှုဘ၀ပုံရိပ်တွေကို စုစည်းတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ “သမိုင်းတလျှောက်ပေါ့ အင်္ဂလိပ်ခေတ်၊ ဂျပန်ခေတ်၊ ဦးနု၊ ဦးနေ၀င်ခေတ် အကုန်လုံး ဒီဘက်ကို ဂရုမစိုက်ဘူး၊ လမ်းလဲ မတည်ဆောက်ဘူး၊ ကျောင်းလဲ မထောင်ဘူး၊ ဆေးရုံလည်း မထောင်ဘူး၊ ဒါကြောင့်မို့ အတော်ခေတ်နောက်ကျခဲ့တယ်ပေါ့” (ဦးထွန်းကြည် – ၀ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ကျန်းမာရေး ဒု-၀န်ကြီး) နှစ်ပေါင်း(၂၀)ကျော်ကျော် ကြာခဲ့ပေမယ့် ပန်ဆန်းမြို့မှာ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ အငွေ့အသက်တွေက ကျန်နေပါသေးတယ်။ ပန်ဆန်းမြို့မှာပဲ ၀န်ထမ်းအင်အား ၄၆ ယောက်နဲ့ Wa State TV ရုပ်မြင့်သံကြားသတင်းဌာနကနေေးသတွင်း တစ်နေ့ကိုလေးကြိမ် ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ ဒီဒေသတွင်မှာပဲ ဆုံဖူး ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းကနေ …Read more »
တို့ပြည်တို့မြေ ရှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်းဆီသို့
734 March 4, 2016
ပလောင်ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသထဲက မီးသင့်မြေကနေ ပြန်လည်ရုန်းကန်နေတဲ့ နမ့်ဆန်မြို့နဲ့ ရှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်းဆီက မြောင်ဇီးလူမျိုးများအကြောင်း၊ ဘိန်းစားနောင်တ တခဏ၊ လားရှိုးမြို့ခံများနှင့် စကားပြောခြင်း၊ နမ့်ဆန်မြို့က မီးသတ်သူ၊ လောက်ကိုင် ခရီးသွားများနှင့် စကားပြောခြင်း စတဲ့ ဒေသတ၀ိုက် လူမှုဘ၀ပုံရိပ်တွေကို တင်ဆက်ထားတဲ့ တို့ပြည်တို့မြေ အစီအစဉ် ဖြစ်ပါတယ်။ “ကိုယ့်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုငယ်လေးတွေတောင် မသိပဲနဲ့ တရုတ်တွေလို့ တော်တော်လေး အမြင်လွဲခံရတာတွေ ရှိပါတယ်၊ ဒါက ကျနော်တို့ မြောင်ဇီးတွေရဲ့ မျက်နှာဆုံးရှုံးမှုပါ…” DVB TV – 27.02.2016
တို့ပြည် တို့မြေ (ရှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်း)
761 February 28, 2016
တို့ပြေ တို့မြေ (ရှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်း)
တို့ပြည် တို့မြေ ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝသို့
1172 February 22, 2016
တို့ပြည် တို့မြေ ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝသို့……….
တို့ပြည်၊ တို့မြေ ချင်းပြည်နယ်ပလက်ဝမြို့သို့
688 February 21, 2016